Using tea to loose weight
Kusukela namhlanje kumele uyeke ukuphuza i-coffee uqale uphuze itiye (green tea), i-green tea ihlanza umzimba wakho ikhuculule ukungcola. Sizobheka ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-green tea ekwehliseni isisindo sakho. Ukuphuza i-green tea kwehlisa amafutha emzimbeni, uma uphuza i-green tea ungawufaki ushukela, esikhundleni sikashukela faka uju olubhalwe ukuthi luyimvelo (natural).
Udinga ukuphuza izinkomishi ezimbili no half we-green tea ngosuku. Ungavuka ekuseni uphuze i-green tea bese uyiphuza futhi sewulala. Enza itiye lakho kwi-pot unikeze i-green tea isikhathi sokuthi ingene kahle emanzini, bese ufaka uju noma ufake u-lemon phakathi etiyeni. Nazi izinhlobo ze-green tea ezizokwenza wehle emzimbeni:
Herbal Energy Green Tea
Okunye ongakufaka etiyeni lakho nakho okusiza ekwehliseni isisindo yi-cayenne pepper, lemon ne garlic. Kumele ufunde i-packet letiye lakho ubheke ukuthi awukho yini ushukela ofakiwe, uma linoshukela ungalithengi. Amanye ama-green teas awafuni ukuthi uwabilise kakhulu aphuma umsoco, lokho kuyabhalwa kwi packet. Ukuphuza i-green tea kuyisiqalo sokwehlisa isisindo, ngeke isebenze i-green tea uma uzodla noma yini.
Ngaphandle kokwehlisa isisindo i-green tea inempilo, yehlisa nomkhaba, yehlisa amathuba e-cancer yamabele, yehlisa i-strees nama moods , yenza isikhumba sibukeke sisihle, yehlisa amathuba okuphathwa isifo senhliziyo, yehlisa ushukela emzimbeni. Udinga ukuyiphuza zonke isinsuku ukuze uvikeleke kwezinye izifo.
Lemon juice iyasiza ekwehliseni isisindo, noma ingelona usizo olukhulu ekwehliseni isisindo, i-lemon iwusizo kakhulu emzimbeni, yenza umzimba ube nempilo, isikhumba sibukeke sisihle. Uma unenkinga yama-moods futhi i-lemon izowehlisa ama-moods.
Slindile ngema 2020-10-29 09:34:30
Ne Rooibos iyasehlisa isisindo?
Loose weight , Ehlisha umkhaba
Itiye loku-loose weight
Juice yokwehlisa i-weight
Vegitables ehlisa i-weight
Loose weight ngokulala
Susa ikiwi,ama stretch marks, looking skin
Ukwenza isikhumba sibe sihle
Enza isikhumba esihle ngamanzi eRice
Enza isikhumba Lemon Juice esihle
Susa stretch marks ne-kiwi
Iba nesikhumba esinempilo
Inkomo etight nokukhulelwa
Ukwenza inanazi ibe tight P1